ချစ်ကြည်အေး: Cebu မြို့(ဖိလစ်ပိုင်) သို့ တခေါက်
ခုမှပဲ အင်တာနက် ဝင်လို့ရပါတယ်...Cebuမြို့ ဖိလစ်ပိုင်မှ အားလုံးကို သတိရ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဂျီမေးလ်ကတော့ ကော်နက်ရှင်ကြောင့် တချို့တွေ ဖွင့်လို့ မရနိူင်ပါလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဖွင့်မဖတ်ရသေးပါဘူး။ စနေနေ့မနက်က လေဆိပ်မှာ ရိုက်တဲ့ပုံတချို့နဲ့ ဆီဘူးမြို့ အဝင်မှာ ရိုက်ဖြစ်တဲ့ ပုံတချို့ တင်ပေးချင်ပေမဲ့ အပ်လုဒ် မရတဲ့ ပြဿနာကြောင့် ပြန်လာမှပဲ တင်ပေးပါတော့မယ်။
ဆီဘူးမြို့ဟာ သာယာလှပပြီး မိုးမရွာရင် အင်မတန် ခြေခင်းလက်ခင်းသာတဲ့မြို့ကလေးပါ။ ဒီခရီးက Leisure သက်သက် မဟုတ်ပဲ personal နဲ့ twistဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ် မဖြစ်တော့ပဲ မြို့ခံမိတ်ဆွေတွေရဲ့ လက်ထဲကို ကျမတို့ရဲ့ သွားရေးလာရေး ဝကွက်အပ်ထားရတဲ့ ခရီးမို့ အင်မတန် ဇိမ်ကျနေတယ်လို့ ဆိုနိူင်ပါတယ်။ သူတို့က ဘယ်သွားသွား ကားနှစ်စီးနဲ့ ရှင်လောင်းလှည့်သလို တအိမ်လုံး လိုက်လာချင်သူတွေဖြစ်ပြီး ကျမတို့ နှစ်ယောက်ထဲဆို စိတ်ချလက်ချ ဘယ်ကိုမှ မလွှတ်ကြပါဘူး။
ခုလည်းပဲ သူတို့လာခေါ်မဲ့ ကားစောင့်ရင်း ရေးနေတာပါ။ ဒီဟိုတယ်မှာ အင်တာနက်က အိပ်ခန်းထဲမှာ မမိပဲ ဟိုတယ် စားသောက်ဆိုင်နဲ့ ဟိုတယ် လော်ဘီထဲမှာပဲ ကော်နက်ရှင် မိပါတယ်။ လော်ဘီကလည်း ကျဉ်းတဲ့အပြင် လူဖြူ အထီးကြီးက တချိန်လုံး သူ့အိမ်သူ့ရာလို နေပြီး အင်တာနက် သုံးနေတာကြောင့် မသွားချင်၊ စားသောက်ဆိုင်ကျတော့လည်း ညဘက် ကျမတို့ ပြန်လာတာနဲ့ သူကပိတ်သွားတော့ တော်တော် ခက်နေပါတယ်။ ခုမနက်လေးတော့ ကံကောင်း ထောက်မစွာ ကားလာမကြိုခင် နဲ့ အိမ်ကလူကြီး Hotelက SPA မှာ အနှိပ်ခံနေတုန်း ကျမက ဖျာဝင်ခင်းလိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ...:)
ဒီပို့စ်ကတော့ ဓါတ်ပုံတင်မရလို့ သတင်းပေး နှုတ်ဆက်ချင်တာ သက်သက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ရေးဖော် သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးနဲ့ ကျမ ခရီးမထွက်ခင် တက်ဂ်ပိုစ့်လေး တခုတ်တရ ရေးပေးခဲ့တဲ့ ညီမလေးများ၊ကျမရဲ့ ဘလော့ကို လာလည်ကြသော မိတ်ဆွေများ ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်၊ သတိရနေတဲ့ အကြောင်း၊ ပြန်လာရင် စာတွေ အကြွေးဆပ်ပြီး လိုက်ဖတ်ပါ့မယ်လို့လည်း ပြောချင်တဲ့ အကြောင်း ဒီကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ပြောရင်း ပြန်လာမှပဲ တွေ့ကြရအောင်နော်....။
TZA Sun Jul 18, 02:55:00 PM GMT+8
မောင် လေး Sun Jul 18, 03:20:00 PM GMT+8
Shinlay Sun Jul 18, 03:32:00 PM GMT+8
ဖီလစ်ပိုင်သူငယ်ချင်းတွေကတဆင့် ကြားဖူးနေပေမဲ့ 
မြန်မာတယောက်ရဲ့ အတွေ့ အကြုံကို သိချင်နေပါတယ်။
ညီမလေး Sun Jul 18, 03:52:00 PM GMT+8
လက်ဆောင်ဝယ်လာနော် စောင့်နေမယ်း)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Sun Jul 18, 04:36:00 PM GMT+8
အစ်မက အတော့ကို သံယောဇဉ်ကြီးတတ်တယ်နော်...
နေ၀သန် Sun Jul 18, 05:25:00 PM GMT+8
Haveanice trip! :)))
Ree Noe Mann Sun Jul 18, 06:28:00 PM GMT+8
ပျော်ရွှင်စရာ ခရီးလေး ဖြစ်ပါစေ အမရေ.......
ပူးတေ Sun Jul 18, 07:37:00 PM GMT+8
haveanice trip. ဓါတ်ပုံလှလှလေးတွေ ရိုက်ခဲ့နော်... ပြီးရင် ဘလော့မှာ ကြွက်ချောက်ပေါ့... အဲ မွှားတွားတယ်.... ဘလော့ပေါ်မှာ ညီမလေးတို့ကို ပြန်ကြွားပါလားလို့......
ဒွေးဆပ်ပြာမှုန့်ကြော်ငြာထဲကလိုလေ... ချစ်လို့ကျီစယ် သေသွားတယ်... ဘာဖြစ်လဲ ဘာဖြစ်လဲ....(တကယ်က... ချစ်လို့ ကျီစယ် ပေသွားတယ်..)
လသာည Sun Jul 18, 07:45:00 PM GMT+8
ဒါပဲနော် မုန့်များများဝယ်ခဲ့..းD
ဇွန်မိုးစက် Sun Jul 18, 08:07:00 PM GMT+8
Looking forward to see the fotos. :)
Enjoy your holidays over there!
အင်ကြင်းသန့် Sun Jul 18, 08:16:00 PM GMT+8
ဟိုနေ့က မမှာလိုက်ရဘူး။ မုန့်ဒွေအညားဂျီး ၀ယ်ခဲ့း))
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Sun Jul 18, 08:58:00 PM GMT+8
စီးဗူး မှာ ချီးဗူးတို့ အဖွဲ့ ရောက်နေကြတာကိုး
Anonymous Mon Jul 19, 03:38:00 AM GMT+8
ပျော်စရာ ခရီးဖြစ်ပါစေ အစ်မချစ်..
မောင်မောင် Mon Jul 19, 04:23:00 AM GMT+8
ဟောဗျာ ဆီဗူး ကို ရောက်နေတာ ဆီတစ်ပေပါလောက်ခပ်ခဲ့ ပေးပါ။
သြော် အိမ်ကလူကြီး အနှိပ်ခံတုန်း ဖျာခင်းတဲ့ ပို့စ် နဲ့တိုးနေပါရောလား။
Anonymous Mon Jul 19, 10:51:00 AM GMT+8
An Asian Tour Operator Mon Jul 19, 10:58:00 AM GMT+8
အရင် လိုအသေးစိပ် လေးတွေဆက်ရေးပါဦး.. :-)
မောင်မိုး Mon Jul 19, 11:03:00 AM GMT+8
ဆီဗူးမှာ ချီးဗူးတွေ သောင်းကျန်းနေတယ်တဲ့..။.
Cameron Mon Jul 19, 08:03:00 PM GMT+8
အမချစ်က ခရီးသွားနေတာကိုး ပျောက်နေပါတယ်လို့...။ ပြန်လာရင် ၀ယ်လာတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ ကြွားပြဦး အမသွားတဲ့ စီဗူးမှာ ဘာတွေပေါလဲ...စိတ်ဝင်စားတယ်...။ တဂ်ပို့စ်လေး ပြီးကြောင်းပါး အမ..။
မောင်သီဟ Mon Jul 19, 08:38:00 PM GMT+8
ဟဟး) စီဗူးက ချီးဗူးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် မချစ်ရေ... ဖီလယ်ပီးမလေးတစ်ယောက်လောက် တားအတွက်း)း)
စုချစ် Wed Jul 21, 01:22:00 PM GMT+8
ပြန်လာရင် နောက်ထပ်ခရီးသွားဆောင်းပါးကောင်း တခု မျှော်လင့်လျက်...